कुनै पनि व्यक्ति पानी बिना कसरी बाँच्न सक्छ ? पानी पिउनमा यस्तो गल्ति नगर्नुहोला | Khabar Sadan खबर सदन
Home अन्य कुनै पनि व्यक्ति पानी बिना कसरी बाँच्न सक्छ ? पानी पिउनमा यस्तो...
शरीरलाई धेरै आवश्यक कार्यहरू गर्न धेरै पानी चाहिन्छ, जस्तै आन्तरिक तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्नु र कोषहरूलाई जीवित राख्नु। औंठाको सामान्य नियमको रूपमा, एक व्यक्ति करीव ३ दिनसम्म पानी बिना बाँच्न सक्छ। जहाँसम्म, केहि कारकहरू, जस्तै एक व्यक्तिलाई कति पानी चाहिन्छ, र यसले कसरी पानी प्रयोग गर्दछ, यसले यसलाई असर गर्न सक्छ।
कारकहरू जसले व्यक्तिलाई कति पानी चाहिन्छ परिवर्तन गर्न सक्दछ :
औसत व्यक्ति पानी बिना कसरी बाँच्न सक्छ?
साझा एक व्यक्ति को सम्पूर्ण स्वास्थ्य तिनीहरूले कति पानी पिउन आवश्यक छ निर्धारण गर्न सक्छन्। शरीरलाई धेरै आवश्यक कार्यहरू गर्न धेरै पानी चाहिन्छ, जस्तै आन्तरिक तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्नु र कोषहरूलाई जीवित राख्नु। औंठाको सामान्य नियमको रूपमा, एक व्यक्ति करीव ३ दिनसम्म पानी बिना बाँच्न सक्छ। जहाँसम्म, केहि कारकहरू, जस्तै एक व्यक्तिलाई कति पानी चाहिन्छ, र यसले कसरी पानी प्रयोग गर्दछ, यसले यसलाई असर गर्न सक्छ।
एक व्यक्तिलाई कति पानी चाहिन्छ भनेर परिवर्तन गर्न सक्ने कारकहरू:
शारीरिक कारकहरू, जस्तै उचाई र वजन
सेक्स के व्यक्तिले खाने कुराले उनीहरूले पिउने पानीको मात्रालाई असर गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि, फलफूल, जुस, वा तरकारी जस्ता पानीले भरिएको खाद्य पदार्थ खाने व्यक्तिले अन्न, रोटी र अन्य सुख्खा खानाहरू खाइरहेको व्यक्तिले त्यति पिउन आवश्यक पर्दैन। एक व्यक्तिमा रहेको वातावरणीय अवस्थाले उनीहरूको शरीरले कति पानी प्रयोग गर्दछ भन्ने कुरालाई असर पार्दछ। धेरै तातो मौसममा बस्ने एक व्यक्ति पसिना आउनेछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई बढी पानी गुम्नेछ। एक मौसम-नियन्त्रित वातावरणमा एक व्यक्ति पसिना आउनेछैन कि तिनीहरूले त्यति पानी प्रयोग गर्दैनन्। यदि पखाला लाग्ने वा बान्ता गर्ने कुनै व्यक्तिलाई पानीको पहुँच हुँदैन भने, उनीहरूले यी समस्याहरू बिना कसैको भन्दा छिटो पानी गुमाउनेछ।
पानी नभएकोको असर
मानिसहरू पानी बिना मात्र थोरै मात्र बाँच्न सक्दछन् किनकि शरीरलाई प्राय: सबै प्रक्रियाको लागि आवश्यक पर्दछ, यी सहित:
पसिना र सास फेर्दै शरीरको तापक्रमलाई नियमित गर्दै
लार गठन गरेर र खाना तोड्दै पाचनमा सहयोग गर्दै
ओसिलो पार्ने श्लेष्म झिल्ली
शरीरको सन्तुलन गर्न मद्दत गर्दै
स्नेह जोड्ने र मेरुदण्ड
दिमागलाई केहि हर्मोनहरू बनाउन र प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ
कोषहरू बाहिर विषाक्त पदार्थहरू ढुवानी गर्न मद्दत गर्दै
मूत्र र सास मार्फत फोहोर हटाउने
शरीर भर अक्सिजन वितरण
पानी बिना, शरीर सहि ढङ्गले कार्य गर्न असमर्थ छ र काम गर्न रोकिनेछ। डिहाइड्रेशनको प्रभावहरू द्रुत रूपमा आउँदछन्, विशेष गरी अत्यन्त तातो अवस्थामा जब कुनै व्यक्ति पसीन्छ। शरीर पसिना उत्पादन गर्न पानी प्रयोग गर्दछ, जो वाष्पीकरण हुन्छ र एक व्यक्तिको शरीरको तापमान कम गर्दछ। पानी बिना, शरीर पसिना उत्पादन गर्न सक्दैन। यसले शरीरको तापक्रममा खतरनाक वृद्धि निम्त्याउँछ र रगतलगायत शरीरमा तरल पदार्थलाई दबाब दिन्छ। यदि यसले रगतको खण्डमा गिरावट ल्याउँछ भने, शरीरमा कम रगत चल्छ, रक्तचापमा गम्भीर ड्रपको कारण। यो आफै बेहोश वा मृत्यु हुन सक्छ। उही समयमा, मुख सुक्छ, र पाचन प्रणाली धीमा हुन्छ।
पानीले शरीरलाई कोषहरूबाट विषाक्त पदार्थहरू हटाउन मद्दत गर्दछ र उनीहरूलाई पिसाब र सास फेर्दछ। पानी बिना, शरीरले यो प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्दैन, विष र निर्माण गर्नको लागि। एउटा विषाक्त निर्माणले मिर्गौलालाई हानि पुर्‍याउँछ, जसले शरीरबाट विष हटाउने प्रक्रिया गर्दछ। यदि मिर्गौला असफल भयो भने, विषले अझ बढि बनाउँदछ, व्यापक अंग विफलता र मृत्युको कारण
Previous articleसोमबार साँझसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए एमाले एकता नहुने ओलीको घोषणा छ
Next articleलोकप्रिय बलिउड अभिनेता आमिर खान र पत्नी किरण रावले किन सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरे ?